Omenala Arab | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | omenala
Anyị na-ebi na a iche iche ụwa na ọ bụ na di iche iche na-eme ka anyị na-akpali dị ka a umu. Taa, anyị ga-ahụ Omenala Arab, na-atụle, ma n'otu oge ahụ na-agbalị ịhapụ ihe oyiyi ahụ nke mgbasa ozi na-enyekarị anyị banyere ya.
Choputa, muta, uru, nkwanye ugwu, ndi ahu bu okwu anwansi maka ezigbo ibi ndu. Taa, ọdịbendị ndị Arab ga-abụ ihe mmalite nke isiokwu anyị.
Mbụ ị ga-aghọta nke ahụ Omenala Arab na Islam nwere njikọ chiri anya. Dabere na World Bank, na 2017, e mere atụmatụ na ndị Arab na ụwa bụ 414.5 nde ekesa tumadi na 22 mba ha nọ na Middle East na North Africa. Turkey na Iran anọghị n’otu a n’ihi na ha na-asụ Turkish ma ọ bụ Farsi.
Ọ bụ ezie na e nwere okpukpe ndị ọzọ na mpaghara ahụ Alakụba bụ okpukperechi kachasị, ihe dịka 93% nke ndị bi na ya bụ ndị Alakụba na ndị Kristian na-anọchi anya 4% n'otu mpaghara a. Alakụba na-achịkwa Quran, akwụkwọ kwenyere na Chineke ekpugheere ya onye amụma Muhammad site n'aka ya onwe ya site n'aka onyeisi ndị mmụọ ozi Gabriel. A maara iwu Alakụba dịka Sharia ọ ghọwokwa akụkụ dị mkpa nke iwu na ọbụna iwu nke ụwa n'ọtụtụ mba.
Sharia, ụzọ ahụ, bụ ntọala nke usoro uru Arab dum. E kewara ya na uzo ise: iguzobe ikpe ziri ezi, mmuta, ezi omume nke obodo na nke onwe, igbochi nsogbu ndi mmadu na obodo, na igbochi mmegbu. Eziokwu bu mba Arab ọ bụla na-asụgharị Islam dị iche, ụfọdụ na-aka ike karịa ndị ọzọ nwere ọbụna ntaramahụhụ ọnwụ (igbupụ aka ndị ohi, dịka ọmụmaatụ).
Ndị Alakụba ha na-ekpe ekpere ugboro ise n’ụbọchị na ndụ niile na-ahazi gburugburu oge ise ahụ. Mụ nwanyị nọ na ụlọ alakụba na-eji ejiji dị mma ma na-ekpuchi isi ha, onye ọ bụla na-ewepụ akpụkpọ ụkwụ ya na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nọpụrụ iche. N'oge Ramadam, nke-iteghete, nke di nsọ, dị ka kalenda ndị Alakụba, ndị mmadụ na-ebu ọnụ site n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda anyanwụ.
Na omenala Arab ezinụlọ dị mkpa na otu ụzọ esi jigide njikọ agbụrụ, yana njikọ ezinụlọ. Okwu a bụ "Mụ na ụmụnne m megide ụmụ nwanne nne m, ụmụ nwanne nne m na mụ na ndị ikwu m," na-ese ha nke ọma. Usoro ọmụmụ dịkwa mkpa. Bụ a Omenala ndi nna nke nwoke na-elekọta ezinụlọ ya ma ọ bụrụ na ọ gaghị enwe ike, ọ bụ ihe ihere. Nne nwere ọrụ ọdịnala ma nọrọ n'ụlọ, na-azụ ụmụ, na-elekọta ụlọ.
A na-etolite umuaka di iche iche, na-adabere ma ha bu nwoke ma obu nwanyi. Childrenmụaka na-ahapụ ụlọ mgbe ha lụrụ di ma ọ bụ naanị otu n'ime ha na-anọ n'ụlọ nne na nna ha iji lekọta ha. A) Ee, Omenala Arab na-asọpụrụ ndị okenye ya. A na-enyocha ha n'ọtụtụ okwu, ọbụlagodi mgbe ekwenyeghị ihe ha kwuru. Usoro ahụike na mba ndị a adịkarịghị mma, ya mere ụmụ agbọghọ na-atụkwasịkarị nne ha ma ọ bụ nne di nne ha obi nke ukwuu n'ịzụ ụmụ ha.
Omenala Arab ọ na-emere ya anyaụfụ ọ dịghịkwa mgbe mmadụ ọ bụla ga-ekwu okwu n'ezinụlọ dị obere. A sụgharịrị ihe nzuzo a n'ime ụlọ nke ụlọ, ebe enwere ebe ndị nkịtị nwere ike ịnabata ndị ọbịa na ebe ha na-agaghị abanye.
Kedu ka mmekọrịta dị n'etiti onye Arab na onye ọbịa? Ihe a na-emekarị bụ na ọ bụrụ na anyị abanye n’ime ụlọ ebe ndị Arab nọ, ha na-ebili iji nabata anyị. A naghị emetụ ụmụ nwanyị aka, belụsọ na nwanyị Arab ga-ebu ụzọ wepụta aka ya, a naghị agwa ha okwu tupu ha emee ka ị mata, a jụghịkwa nwoke Arab maka nwunye ya na ụmụ ya nwanyị.
Iwebata onyinye dị ka ọ dị n’ọdịbendị ndị ọzọ, bụ ihe kacha egosi na ịkwanyere mmadụ ùgwù. Ajụla ịkpọ oku ị ga-emerịrị ya jiri aka nri gị mgbe niile mgbe ị na-eri nri, na-a drinkingụ ma ọ bụ na-agafe nri na ihe ọ drinkụ drinkụ. Nri dị mkpa na ọdịbendị Arab, ịkekọrịta achịcha, iri azụ na atụrụ.
Enwere ihe dị iche na uwe ndị Arab? Nke bụ eziokwu bụ na omenala dị iche iche site na mba ruo na mba, mgbe ụfọdụ enwere uwe ndị obodo ma ọ bụ ụmụ nwanyị ga-eji ya hijab ma obu a agba na-ezo ozu ya dum. N'ebe ndị ọzọ, akwa ndị a bụ ndị ọdịda anyanwụ.
Ihe ọ bụla, mgbe niile O ziri ezi ikpuchi ebe ụfọdụ site na obi umeala: ubu na ogwe aka. Nke a apụtaghị na ụmụ agbọghọ kachasị ugbu a, na mba kachasị ọhụrụ, anaghị eyi uwe elu dị mkpụmkpụ ma ọ bụ akwa jeans. Mana, ee, ọ bụrụ na anyị ga-aga mba Arab anyị ga-eburịrị obere uwe.
Ọ bụ eziokwu na ha bụ ebe na-ekpo ọkụ na naanị otu onye chọrọ iyi uwe dị mkpụmkpụ mana n'akụkụ ebe a, nwanyị anaghị eyi ụdị uwe a, yabụ, anyị ga-enweta nlebara anya na-adịghị mma. Ikekwe Dubai ma ọ bụ mba ndị ọzọ dị n'akụkụ a nwere ahụ iru ala karị, mana anyị agaghị echefu otu ọdịbendị ndị Arab si dị.
Ugbu a, karịa njirimara nke ọdịbendị ndị Arab nwere taa, ma dị oke mkpa mgbe ị na-ejegharị, ị ga-ama nke ahụ Omenala Arab bara ọgaranya ebe obula lee gi anya. Na akwụkwọ Arabice juputara na akụ, otu egwu na igba egwu na kemgbe nnwere onwe, na ndị na-achị nke mba Europe, sinima. Mụta obere ihe na ya dị mma mgbe niile, n'ihi na ọ na-eme anyị ọgaranya.
Ugbu a, n'ezie, dị ka nwanyị, enwere ọtụtụ nsogbu na-adịghị m mma. More taa, na n'ọtụtụ akụkụ ụwa anyị na-alụ ọgụ maka ikike anyị na ọha mmadụ macho dị otú a. Mana enwere m nchekwube ma m na-agbalị ghara ịbụ otu agbụrụ.
Akara m iche n’omenala dị ka asụsụ. Anyị niile bụ ndị omenaala ka anyị bụ ndị na-ebu otu ma ọ bụ ọdịbendị ọzọ, ma ọ bụrụhaala na ọdịbendị ahụ dị ndụ ọ ga-agbanwe mgbe niile. Ya na ire ya. Yabụ, ụwa ụwa niile anyị bi na ya na-eme ka ọdịbendị ndị ahụ na-agbanwe agbanwe gbanwee. Enwere olile anya na ụmụ nwanyị na-achọ mgbanwe dị mma na mba ndị a ga-enwe ike ịga n'ihu n'ụzọ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » omenala » Omenala Arab